3 mai 2018 · déliremadagascar
Archives journalières 3 mai 2018
Nanamarina ireo antontan-taratasy iatrehana ny fanadinana ahazoan’i Madagasikara ny fanamarinana fahafongoran’ny aretina lefakozatra ny delegasiona avy amin’ny vaomiera misahana ny fanomezana izany ho an’ny faritra Afrika (CRCA). Continuer la lecture →
Sport	 3 mai 2018 R Nirina
TENNIS MALAGASY : Misongadina amin’ny latsaky ny 14 taona.
Tompondakan’i Afrika Austral ny ekipa Malagasy vehivavy latsaky ny 12 taona ( U12 ) eo amin’ny taranja tennis. Natao tany Bulawayo , Zimbabwe ity fifaninana ity ny volana Martsa lasa teo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 3 mai 2018 lynda
VONDRONA EROPEANINA : Namokatra ny fiarahamiasa tamin’i Madagasikara
Hetsika maro no hanamarihana ny faha- 60 taonan’ny fiarahamiasan’ny vondrona eropeanina amin’ny firenena Malagasy. Continuer la lecture →
Famatsiam-bola avy amin’ny AFD: Tetikasa roa indray nosoniavina
Ho fitohizan’ny fiarahamiasan’ny fanjakana Malagasy sy ny Agence Française de Développement (AFD), tetikasa roa no natao sonia ny 02 mey 2018. Continuer la lecture →
Fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety: Mampita ny hafatry ny rainy i Francine Ranaivo
Fankalazana ny andro manerantany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ny 03 may. Amin’ity androany ity, miarahaba ny mpanao gazety Malagasy rehetra ny fikambanana AIFM (Alliance Internationale des Femmes de France et Madagascar). Continuer la lecture →